महामारीको बेला नेपालमा अनलाइन र दूरशिक्षा कति प्रभावकारी ?
महामारीको बेला नेपालमा अनलाइन र दूरशिक्षा कति प्रभावकारी ?
बिबिसि । नेपालमा गत शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना चैतको सुरुदेखि नै नियमित पठनपाठन अवरुद्ध रहेको छ।
महामारीका कारण लागु गरिएको लकडाउनका माझ लाखौँ विद्यार्थी अहिले घरमै रहेका छन्।
शहरी क्षेत्रका कतिपय निजी विद्यालयहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सरकारले पनि असार १ गतेदेखि लागु हुने गरि सबै विद्यार्थीका लागि दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा अगााडि सारेको छ।
तर दूर तथा खुला शिक्षाको विधिको प्रयोग कत्तिको प्रभावकारी हुन्छरु यसले विद्यालय जान नपाएका सबैलाई समेट्न सक्छ ?
उनीहरू भन्छन्, ‘कोभिड १९ को कारणले विद्यालयहरू बन्द भएर कक्षाहरू इन्टरनेट मार्फत अनलाइन सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय इन्टरनेटको सुविधा नभएका वा इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका अत्यन्तै गरीब, वञ्चितिकरणमा परेका र ग्रामीण बालबालिकालाई अत्यन्तै असुविधा भएको छ।’
‘यस्तो अवस्थाले प्रविधिले निम्त्याएको विभाजनलाई थप बढाएको छ।’
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भन्छन्, ‘हालको अवस्थामा जतिसकेको उपयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनलाइन, रेडियो, टिभी, पत्राचार वा अन्य हिसाबले विद्यार्थीकहाँ पुग्नुपर्छ।’
वाग्ले भन्छन्, ‘कुनै एउटामात्र विधिमा भर पर्नु पर्छ भन्ने होइन। अनलाइन, रेडियो, टिभी वा हुलाकमार्फत् जे गर्दा हुन्छ सबैको प्रयोग गर्नुपर्छ।’
‘यो अवधिमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई परिचालन गरेर अभ्यासपुस्तिकाहरू तयार पार्नुपर्छ। अनि गाउँघरमा रहेका लाखौँ शिक्षकहरूलाई सुरक्षित परिचालन गरेर घरघरमा विद्यार्थीमाझ पाठ्यसामग्री पुर्‍याउनु पर्छ,’ वाग्लेले भने।
कोइराला थप्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा कुनै एकल विकल्प भन्ने हुँदैन। सबै विधिलाई अगाडि लैजानु पर्छ।’
‘जसलाई जे सुविधा छ त्यही प्रयोग गर्छन्। यहाँ शिक्षकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’